Wararka Maanta: Talaado, Apr 17, 2012-Faahfaahin ku saabsan Ismiidaamin ka dhacday Degmada Baydhabo iyo Al-shabaab oo Mas'uuliyada sheegatay
Faahfaahin ku saabsan Ismiidaamin ka dhacday Degmada Baydhabo iyo Al-shabaab oo Mas'uuliyada sheegatay Talaado, Abriil 17, 2012 (HOL) — Weerar ismiidaamin ah oo sakaay Baydhabo ka dhacay ayaa waxaa mas'uuliyaddiisa sheegatay Al-shabaab waxaana ku dhintay hal askari oo la sheegay inuu dhaawac halis ah kasoo gaaray qaraxaas.
Ruuxa ismiidaaminta fuliyay ayaa wuxuu markii hore isku dayay inuu galo xarun kasoo horjeedday xarunta ay Qaramada Midoobay ay ku leedahay Baydhabo oo ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan kuwa nabadsugidda DKMG ah, balse waxaa u diiday ilaaladii xaruntaas, isagoo markaas kaddib is-qarxiyay. "Ismiidaamiyaha markii uu ku guuldarreystay inuu galo xarunta ayuu billaabay inuu cararo isagoo ugu dambeyn isku qarxiyay mid ka mid ah ciidamada nabadsugidda DKMG ah, kaasoo dhaawac soo gaaray awgiis ugu geeriyooday isbitaalka degmada," ayay HOL kasoo xigatay goobjooge iyo sarkaal ka tirsan dowladda KMG ah.
Balse sarkaal ka tirsan xafiiska warfaafinta ee Al-shabaab ayaa sheegay inay iyagu ka dambeeyeen weerarka ayna ku dileen saddex sarkaal oo Itoobiyaan ah iyo mid kale oo Soomaali ah, kaasoo uu ku magacaabay Maxamed Dheere, sarkaal kale oo Soomaali ahna ay ku dhaawaceen.
"Weerarka wuxuu ahaa mid qorsheysan waxaana la beegsannay saldhig ay joogeen saraakiil ka tirsan nabadsugidda DKMG ah iyo kuwa ciidamada Itoobiya, sidii aan ugu talogalnay ayuuna u dhacay," ayuu yiri sarkaalka ka tirsan xafiiska wafaafinta ee Al-shabaab.
Qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Baydhabo ayaa qaraxa ku tilmaamay mid aad u xooggan. "Wuxuu ahaa mid aad u xoog badan... waxaana goobta ku arkay qof dhitay," ayay tiri Sacdiyo Nuur oo ka mid ah dadka ku nool degmadaas.Horraantii bishan ayay ahayd markii weerar loo adeegsaday miino la dhigay suuqa Baydhabo lagu dilay 11-qof oo shacabka in ka badan 30-qof oo kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana mas'uuliyadda weerarkaas sheegatay Al-shabaab.
Ciidamada DKMG ah iyo kuwa Itoobiya oo iskaashanaya ayaa bishii Feberaayo ee sannadkan kala wareegay Al-shabaab degmada Baydhabo oo 250-km u jirta xarunta Soomaaliya ee Muqdisho, waxaana ismiidaamintan ay noqonaysaa tii ugu horreysay oo degmadaas ka dhacda.
Talaado, April 17, 2012 (HOL) - Waxaa maanta magaalada Nairobi lagu qabtay shir ay soo qabanqaabisay wasaarada dastuurka kaasoo looga tashanayay ka bixitaanka ku meel gaarka iyo dhammaystirka dastuurka qabyada ah. Xisbiga Nabada Iyo Hormarka oo sheegay in Madaxda Dowladda ay wadaan qorshe ay ku keensanayaan xubno dib u soo doorta 4/17/2012 10:39 AM EST
Talaado, Abriil 17, 2012 (HOL) — Danjiraha Talyaaniga ee Soomaaliya, Mr. André Marcela oo Muqdisho kula warbaahinta ayaa sheegay in mas'uuliyiinta DKMG ah ee Soomaaliya uu kala hadlay qaabka loosoo xulayo odoyaasha ansixinaya dastuurka Soomaaliya iyo xulidda xildhibaannada cusub ee bedelaya kuwa hadda shaqeynaya. Somali News